Noocyada Guurka Casriga & Qadiimka ah ee Soomalida | Where Education Talks
Noocyada Guurka Casriga & Qadiimka ah ee Soomalida	September 29, 2009
Filed under: Uncategorized — aqoonkaab @ 6:54 pm Guurku waa qayb ka mid ah nolosha, waxana soomalidu leedahay dhaqan u gaar ah oo uu u dhaco guurku. Ugu horayn inanku marka uu rabo inuu guursado waxay soomalidu ku tilmaantaa erayo kala duwan waxana ka mid ah: Guurdoon, Guux baa haya ama wuu guuxayaa, waa Dillaac maagane, waa calafdoon, waa gunuunucay iyo waa qalqaalo iyaga oo ka wada qalqaalo guur ayuu ku jiraa. Sikastaba ha ahaatee, guurku waa noocyo badan yahay waxana ka mid ah:
1. Dadab Gal- waa marka inanta la soo doono.
2. Xaal- Gabadh xaal loo bixiyey
3. Dumaal- Marka gabadha ninkeedu dhinto waxa guursada ninka dhintay walaalkii waxana la yidhaahdaa wuu dumaalay. Sidana waxa loo sameeyaa iyada oo caruurta loo danaynayo.
4. Xigsiisan- Marka ay geeriyooto xaaska ama gabadha ninku waxa la siiyaa ninka gabadh kale oo ay walaalo yihiin tan dhimatay .
5. Godob-reeb- Guurka ku yimaada marka gabadh la bixiyo si loo soo afjaro colaad u dhaxaysa laba beelood, iyada oo lays waydaarsado gabdho godob reebo ah ama la siiyo dhinac keliya oo ah dhanka wax laga dilay.
6. Guur Qasab- waa guurka odayga inanta dhalay ama dadka ka masuulka ahi ku doonaan mansab sida iyadoo la siiyo nin maalqabeena , waxana la odhan karaa waa guur xoolo ama maal adduun lagu doonayo ama arrin la mida iyada oo aan inantu wax xorriyad ah u lahayn inay doorato qofka nolosha la wadaagaya balse ay ku khasbanaato inay yeesho sida ay usoo jeediyaan waalidkeedu.
7. Ku qaado- Hadii ay dhacdo in ninku faraxumeeyo ama dhib gaadhsiiyo gabadh waxa lagu yidhaahdaa ku qaado macnaha mar hadii aad dhibta keentay waa inaad guursataa isla gabadhii aad dhibaataysay.
Guurka Casriga ah:
Waxa jira gobolada waqooyi (Somaliland) noocyo guur oo casri ah taas oo eray bixino cusub loo baxshay waxana ka mid ah:
-Guurka Abaydin gadh-leh: Abaydinku waa ilmaha yar ee hooyadii naaska ay ka gudhisay ee caano la siiyo. Hadaba shaqo la’aanta baahsan awgeed waxa dhacday waqtigan in ninku guriga joogo gabadhuna soo shaqayso markaa isaga ( ninka) iyo caruurtii baa isku mida oo labaduba wax ka sugaya gabadhii.
-Guurka Tahriibta- Marka habluhu tahriib afka saaraan waxa dhacda in mid ka mid ah wiilasha ay la socoto ama mid kaleba ay barato kadibna halkaas ay ku noqdaan qoys cusub oo laga warhelo uun iyagoo isqaba ama ubad isu dhalay.
-Guurka Visa nool- Inamo dhalinyaro ah oo dalka jooga ayaa dumar debeda ka imanayaan ha ahaadeen kuwo kusoo guur beelay ama dookhoodu siiyay inay dalka ka guursadaan. Hadaba waxa dhacda in marka ay halkan (Somaliland) yimaadaan ay guursadaan dhalinyaradii dalka joogtay kadibna waxa la odhanayaa hebel wuxu guursaday “visa” nool oo soconaya.
Gobolada koonfurta Soomaliya waxa iyana ka mid ah guurka casriga ah:
-Guursimo- Waa marka inanta loosoo doono si toos ah.
-Qudhbabtiro-waa guur ku lidi ah kan hore ee guursimaha waayo waa mid qarsoodi ah. Waxana dhacda in inantu cabsi ay ka qabto qoyskeeda darteed aanay awoodin inay shaaciso sidaana ku qariso oo mudo danbe la ogaado inay guri leedahay. Waxa kale oo keeni kara marka aanu ninku dhaqaale fiican oo uu guri ku yagleelo haysan sidaas darteedna inantu la deganaato qoyskeeda, markaa iyadoo halkas joogta ayaa hadana la qabaa.
-Guur safar ama Meher Safar- waa guurka ku yimaada marka ninku shaqo ka hayo gobol kale halkaasna ku guursado xaas cusub, kadibna marka shaqadiisu usoo dhamaato laga yaabo inuu iska fasaxo oo waraaqdeeda usoo yeedhsho.
-Guurka Faadimo soonqaad- waa guurka dhaca waqtiga Ramadanta lagu jiro ama waqtiga ay soo galayso.
Dhanka gobolada Bari (Puntland) guurka casriga ah waxa ka mid ah:
-Guurka Soo togo- waa guur la mid ah Heerinka oo ah marka dumar ay u dhaqaaqaan in la guursado iyaga oo xataa u safra meelo kale si loo guursado.
-Guurka xagaa baxa- mudada lagu jiro fasaxa xagaaga ama xagaa baxa ayuu dhacaa iyada oo ninku gabadh kale guursado sidaana ku yeesho xaas labaad.
-Guurka Rubaan raqo- wuxu u dhigmaa guurka aynu kor kusoo sheegnay ee la magac baxay Abaydin Gadhleh, waana marka gabadh haysata mehered ama ganacsi leh ay guursato nin si xooluhu ugu dhaqmaan uuna u ilaaliyo iyada iyo xoolaheedaba.
Fiiro Gaar ah: Noocyada guurka kor ku xusan waxa sharaxday Foosiya Axmed Maxamed (Foosiya Hormood) waraysi ay siisay barnaamijka cawayska Washington ee VOA-da waxana soo diyaariyay oo isku soo dubariday Axmed Maxamud Cilmi (Shawqi).